Maxkamadda Gobolka Oo Maanta Soo Gunaanaday Dhageysiga Dacwadda Dilkii “Ruqiya Siciid ayaanle”
Home WARARKA Maxkamadda Gobolka Oo Maanta Soo Gunaanaday Dhageysiga Dacwadda Dilkii “Ruqiya Siciid...
“8 Eeddaysane oo lix ka mid ah loo haysto Fuliyeyaasha Dilka, ayaa todobaadka dambe loogu dhawaaqayaa “Xukun
Hargeysa(berberanews)-Dacwadda siddeed qof oo loo haysto Dilka Gabadh dhawaan Lagu dilay Magaaladda Hargeysa oo Maydkeedda lagu God lagu qariyay, ayaa Maanta Maxkamadda Gobolka Maroodi-jeex soo gabagabaysay dhegeysigeedda, sida ay Gobanimo u xaqiijiyeen Sarkaalkii ka tirsan Maxkamaddu.
Dilka Marxuumad Ruqiya Siciid Ayaanle, ayaa dhacay sida la aaminsanyahay, bishii Feberaury dhawr iyo labaatankeedii ee sanadkan, taasoo inta la dilay Maydkeedda laga helay God looga dhex qoday Guri ku yaala Xaafadda New Hargeysa oo ay degenayd Gabadh ay dayn lacageed kala qaateen oo ka mid ah 8 qof ee Maxkamadda la horkeenay.
Siddeeda Qof ee dhib-geysteyaasha ka ah Kiiskan, ayaa kala ah Afar Caruur ah iyo labaddooda waalid iyo laba qof oo kale oo Nin iyo Gabadh kala ah, kuwaasoo dhamaantood Maxkamaddu dhegeystay eeddaha Xeer-ilaalintu u soo jeedisay soddonkii Maalmood ee ugu dambeeyay oo ay dacwaddu socotay.
Lix ka mid ah Siddeeda ruux ayaa lagu eeddeeyay inay dilka geysteen, labada kalena waxay xeer-ilaalintu ku eeddeysay inay gacan ka geysteen, taasoo sida ay xaqiijiyeen wararka Hay’addaha Garsoorka aanu ka helnay Maxkamaddu dhegeysatay dhamaan dhinacyada ay khusayso iyo Markhaatiyaasha.
Amaanka Maxkamadda ayaa saaka la adkeeyey markii eeddeysaneyaashan la keenay, waxaana lagu wareejiyay Ciidanka ka hortaga rabshadaha iyo Argagixisada (SPU-da iyo RRU-da), taasoo aan loo ogolayn dadka caadiga ah iyo Saxaafaddu inay ka qayb-galaan dhegeysiga Dacwadan.
Kiiskan ayaa waxa Garsoore ka ah, Guddoomiyaha Maxkamadda Gobolka Maroodi-jeex Faysal Dhago-dhago, sida ay Gobanimo u xaqiijiyeen dadka ka qayb-galay, waxaana laga fadhiistay ilaa saddex jeer oo hore.
Garsooraha Dacwadan, ayaa fadhigii maanta ku dhawaaqay in la soo gunnaanaday dhegeysigii dacwadan, isla markaana Maalinta Sabtida ee todobaadka soo socda xukunkeedda lagu dhawaaqi doono.
Shan ka mid ah Lixda Qof ee Dilka ku eeddeysan ayaa sida la sheegay Maxkamadda lagaga markhaati furay, halka eedeysanaha lixaad Xeer ilaalintu aanay wax markhaati ah ka keenin.
Qoys dil geystay
Shanta qofee sida la sheegay lagu Markhaati furay inay fuliyeen falka lagu dilay Ruqia Siciid Ayaanle ayaa kala ah Hooyo iyo Afar Ubad ah oo ay dhashay, kuwaasoo sida wararku sheegeen fadhiyadii hore ee Kiiskan qaarkood qiraal sameeyay.
Odayga Caruurta dhalay iyo Nin kale oo eedeysane ah ayaa ku eedeysan inay gacan siiyeen.
Fal Argagax leh
Qaabka loo fuliyay Dilka Ruqiya ayaa ahayd nid waxshinimo ah oo ay Bulshadu argagax ka muujisay.
Marxuumadda ayaa inta la dilay Maydkeeda lagu aasay Hog looga dhex qoday Guriga Qoyskani degenaa. sida ay caddeeyeen lamaaha amniga ee falkan baadhista ku sameeyay, wuxuu ahaa dil bahalnimo ah oo la doonayay in si qarsoodiya lagu fuliyo.
Ruqiya Siciid ayaanle ayaa la waayay muddo shan maalmood ku dhow, kaddib markii ay goor galab ah Gurigoodda oo ku yaala degmada Maxamuud Haybe ka tagtay, iyadoo Hooyaddeed u sheegtay inay qabanayso Gabadha Gurigeeda lagu hoos qariyay markii la dilay, taasoo arrimo Ganacsi hore u dhex mare
Previous articleProf:Gees Oo Ka Sheekeeyay Codsi Marxuun Cigaal Ku Doonayey Midaw Somaliland Iyo Itoobiya Dhexmara- Dharooro Xusuustood
Next articleSiilaanyo dhiib: Maanso baroor-diiqda Wargeyskii Hubaal sannad ka hor WQ Siciid M Gahayr